Arxanlaawe qiil ma leh (Warbixin) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Arxanlaawe qiil ma leh (Warbixin)
By admin / March 16, 2019 March 16, 2019
Dhacdo aad ay uga xumaadeen Muslimiinta Caalamka iyo dad kaleba ayaa shalay oo Jimco ah ka dhacay Dalka Newzland, kaasi uu sameeyay nin Cadaan ah oo watay Qori iyo Rasaas badan mar uu weeraray laba masaajid, kuna dilay dad badan kuna dhaawacay kuwa kale, ayaa la sheegay in Ninkii ka dambeeyay weerarkii lagu laayay Muslimiin badan ee ku cibaadeesaneysay labo masjid oo ku yaala New Zealand ayaa Shalay la soo taagay Maxkamad ku taala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand .
Ninkasi Fashistaha ahaa oo lagu magacaabo Brenton Tarrant oo ah 28 ayaa maxkamada la soo taagay isaga oo gacmaha ka xiran, sidoo kale xiran dharka maxaabiista ah, Ninkan ayaana la sheegay in indhaha ku gubayay Saxafiyiinta iyo Dadkii kale ee Maxkamada joogay.
Garsooraha Maxkamada oo Ninkan ku soo eedeeyay dambiyo dil ah ayaa amray in xabsiga lagu sii hayo ilaa 5-ta Bisha April xiligaasi oo loo gudbin doono Maxkamada sare si dacwadiisa loo qaado.
Ninkan Maxkamada la soo taagay ayaa ka dambeeyay weerarkii shalay ka dhacay labo Masjid oo ku yaala dalka New Zealand , waxaana weerarkan ku dhintay 49-qof oo salaada Jimcaha sugayay inay dukadaan halka dad kale oo 30 ruuxna ku dhaawacmeen, kuwaasi oo haatan la dabiibayo Isbitaalada ku yaalla Dalkaasi.
Babaanbaxyo loogu soo horjeedo Toogashadii aan loo meel dayin ayaa ka dhacay meelo ka mid ah Caalamka, waxaase ugu xooggaanaa kuwa la isgu soo baxay Minneapolis ee Cariga Marakanka iyo Toronto ee wadanka Canada, haddaan soo qaado midka dhacay Magaalada Toronto ayaa wararku sheegayaan in auy waddooyinka u soo baxeen Dad badan kuwaasi oo watay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ka mid yihiin:- “ma ' ahan in aan ka baqano dadka dhibanayaasha, iyo magaca loo yaqaan, iyo in ay ku magac yihiin meelaha cibaadada ee dadka lagu beegsaday... marnaba nama cabsigalin karaan kuwa nacaybkan.".
Masjidka Sayid Abuubakar ayaa lagu qabtay mid looga soo horjeedo Xasuuqii uu getystay Ninkaasi Cadaanka ah, waxaana aad loogu cambaareeyay Dilkaasi Foosha Xun, waxaana goobtaasi ka hadlay Culiumaaudiin iyo Kuwa qaabilsan Ammaan baxay Minneapolis, waxayna sheegeen inuu falkaasi ahaa mid Argagaxisnimo, islamarkaana aad loo adkeyn doono ammaanka Goobaha Cibaada, sida Masaajidda.
Madaxda Falkaasi foosha Xun ka hadashay waxaa ka mid ah Haweeneyda Raiisul-wasaaraha ka ah Dalka Newzland, Madaxweynayaasha Dalalka Turkiga iyo Maraknaka, waxayna si xun u cambaareeyeen Dilkii loo geystay Dad ku cibaadaynayay Masjidka ku yaalla wadanka Newzland, waxayna ku tilmaameen mid Argagax leh, iyagoo caddeeyay inay si dhow ula shaqeyn doonaan baaroitaanka arrinkaasi, waxaa kaloo arrinkaasi ka hadlay Mudanaha Aqalka Cad Ilhaan Cumar ayaa iyadana falkaasi ka hadashay, waxayna cambaareysay Xasuuqii lagula kacay dad Muslimiin ah.
Dhinaca kalena Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaareeyay weerarka argagaxiso ee bahalnimada leh ee lagu qaaday dad Muslimiin ah oo ku tukanayay Salaadda Jumcaha Masaajidda Al nuur iyo Lindwood ee Magaalada Christchurch ee dalka NewZealand, oo lagu dilay ugu yaraan 49 ruux, laguna dhaawacay dad badan 30 ruux, oo ay ku jireen caruur iyo dad da’ ah, fal dambiyeedkani naxdinta leh waxa uu ka qeyb yahay naceybka, mayal adeegga iyo islaam naceybka.
Soomaaliya waxa ay ma rkale ku celinaysaa oo ay caddeyneysaa inay garab taagan tahay Xukuumadda iyo Shacabka New Zealand, ayna tacsi u direyso qoysaska dhibanayaasha muslimiinta, iyadoo u rajaysay kuwa dhaawaca ah bogsasho iyo caafimaad degdeg ah.
Waxaa sidoo kale ka hadalay Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isna ka tacsiyadeeyey dadkii muslimiinta ah ee ku dhintay weerarkii ka dhacay masaajidyo kuyaal dalka Newzealand, guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay.
Guddoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey dadkii halkaasi ku dhintay,isagoo sidoo kale dowladda iyo shacabka Newzealand tacsi u diray,una rajeeyey dadka dhaawacmay caafimaad deg- deg ah.
Ilaa 49 qof ayaa la sheegay in ay ku geeriyootay oo uu ku jiro Wiil Soomaaliyeed oo 4 sano jir ahaa, tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday masaajidyo kuyaala Christchurch ee dalkaasi, tiro kalena way ku dhaawacmeen, waxaana bukaanada lagu dabiibayaa Isbitaalada ku kala yaalla Dalkaasi, waxaana Ilaah uga baryeynaa inuu intii dhimatay Janadiisa ka waraabiyo inta ku dhaawaacanteyna alle u boogo dhayo, sidaasi awgeed Arxan laawe qiil ma leh.